Nhau - Guizhou's "Gumi neimwe yegumi neshanu-Gore Chirongwa" yakaisa mabhiriyoni mashanu kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa ye10,6 mamirioni evagari vekumaruwa.
Guizhou "Gumi neimwe yegumi neshanu-gore chirongwa" yakaisa mabhiriyoni mashanu kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa ye10,6 mamirioni evagari vekumaruwa.
Munzvimbo yekuvaka ye "Anda Nyowani Murefu Pombi Pombi Yekutakura Mvura" muJinsha County, mhando dzakasiyana dzemuchina wekuvaka dzakabatikana kunzvimbo yemvura nenzvimbo yekuisa pombi kuona kuti chirongwa chikuru chakapedzwa nekupera gore.
Iyo hombe pombi refu-refu pombi yekuendesa mvura mumaruwa ekumwa ekuchengetedza mvura zvirongwa muPurovhinzi yeGuizhou, kana yapera, inogona kugadzirisa dambudziko rekuchengetedzwa kwemvura yekunwa kwevanhu 69,900 vanhu muAnluo Township, Datian Township, uye Xinhua Township yeJinsha County.
Makomuredhi kubva kuDhipatimendi Rekunwa reVanhu reDhipatimendi reMvura vakati pane zvinopfuura zana zvevanhu zvekumwa mapurojekiti ari kuvakwa seizvi.
Munguva ye "Gumi neimwe yegumi neshanu yemakore-chirongwa", kunyangwe paingova nevanhu mamirioni 6.15 vakarongerwa "Nyota yekudzima chirongwa", pachokwadi, paive nemamiriyoni gumi nematanhatu emaruwa ane mvura yekunwa isina kunaka mupurovhinzi, vachionekana nemvura yekunwa nekuda kwe kuitwa kwezvirongwa zvekunwa zvakasiyana kwevanhu.
Kubva 1996 kusvika 2004, Guizhou Province yakashandisa zvikamu zviviri zve "Desire Project" uye "Poverty Relief Project", iyo yakabatsira vanhu vanopfuura mamirioni gumi nemasere vekumaruwa muPurovhinzi yeGuizhou "kunzwa nyota", asi ongororo uye kuongororwa muna 2005 kwakaratidza kuti 23 miriyoni vanhu vekumaruwa mudunhu reGuizhou Vagari vanotambura nemvura yekunwa isina kuchengetedzeka.
Kubva 2006, kuvakwa kweinjiniwa yekuchengetedza mvura yekumwa kuGuizhou kwakatanga. Iyo "nhanho nhatu dzekudyara kwekudyara" yakagadzira yakasimba projekiti yemari cheni, ichiita iyo "Yegumi neshanu-Yegore-Chirongwa" nguva inguva inokurumidza uye inoshanda kwazvo nguva yekumusha yekunwa mvura chengetedzo basa muGuizhou Province.
Zvinotarisirwa kuti panopera gore rino, dunhu richaisa mari inosvika mabhiriyoni mana nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemana emabhiriyoni emadhora emvura yekunwa kumaruwa. Pakati pavo, hurumende yepakati yakaisa mari ye3.012 bhiriyoni, uye marongerwo epakati-fiscal mari ye1.546 yuan bhenefiti yakawedzera mari yevarimi uye mari yakadzoserwa pabasa inopfuura mamirioni mazana matatu emamiriyoni.
Parizvino, dunhu reGuizhou ririkuita chirongwa chegumi nemaviri chemakore mashanu ekuronga kuchengetedzwa kwemvura yekunwa mudunhu, iro rakatyora nekuita basa rekuchengetedza mvura yekunwa vanhu vanosvika mamirioni maviri kusvika matatu emaruwa mudunhu kubva muna2008 kusvika 2012 gore rega, uye zviite gore rimwe pamberi Pamwechete dhizaini dhizaini uye yakazara chirongwa chekushandisa.